China ulwelwesi isakhiwo class ifektri abakhiqizi | Zhenyuan
Ulwelwesi isakhiwo uhlobo bokwakha kanye nesakhiwo lihambisana isakhiwo kohlelo, kuyinto okusezingeni eliphezulu amandla nezimo mncane ifilimu izinto kanye nesakhiwo asizayo ngokusebenzisa indlela ethile kwenza umkhiqizo walo wangaphakathi ezithile ingcindezi eqine, futhi ingcindezi ngaphansi kolawulo uhlobo oluthile isikhala shape, njengomzimba omkhulu, isakhiwo sekhava noma isakhiwo futhi unokuqina okwanele ukumelana nemithwalo yangaphandle yohlobo oluphakathi kohlobo lwesakhiwo.
Ukwakheka kolwelwesi kwephula iphethini yesitayela sokwakheka esihlanzekile, nesimodeli saso esiyingqayizivele esimibalabala esigobile, esifushane, esiphilayo, esiqinile futhi esithambile, inhlanganisela yamandla nobuhle, enikeza abantu umuzwa omusha nowintsha. futhi omele, iqoqo lezakhiwo, imishini yokwakha, imboni yamakhemikhali emihle, isayensi yezinto ezibonakalayo, ubuchwepheshe bekhompyutha njengenye yezinhlelo zokusebenza ezihlukene zobunjiniyela, inokuqukethwe okuphezulu kwezobuchwepheshe nokuheha kwezobuciko, ubuso bayo bungaba izinguquko ezingenasisekelo nezidingo zomklami wokwakha Kuhlanganiswe nemvelo yonke, ukwakhiwa kwesithombe esifanekisela iphrojekthi, nokusebenza okunamandla, anhlobonhlobo kwezicelo.Izikhungo zomphakathi ezinkulu, ezinjenge-roof roof system, ihholo lesikhumulo sezindiza, isikhungo semibukiso, indawo yokuthenga, indawo yokupaka, izakhiwo zepulatifomu , njll. Kungasetshenziswa nasezikhungweni zokungcebeleka, ezikhungweni zezimboni, emihubheni yokungena nasendaweni eyingqophamlando noma ekwakhiweni kwezwe ngs, njll.
Izinzuzo zesakhiwo seMembrane:
(1) Isikhathi eside: Isakhiwo se-membrane sinokusebenza okulula kokukhanya nokuzamazama komhlaba, okungasusa isidingo sokwesekwa kwangaphakathi, ukunqoba ubunzima obuhlangabezane nesakhiwo sendabuko ekufezekisweni kwesakhiwo eside (ngaphandle kokusekelwa), kwakha isikhala esikhulu esibonakalayo ngaphandle kokuvikela, futhi ngempumelelo ukwandisa indawo esetshenziswayo.
(2) ubuciko:ulwelwesi isakhiwo wadabula bendabuko isakhiwo uhlobo, okuyinto kusekelwe ukumodela, umbala, kungenziwa kuhlangene nezimo zemvelo, nikeza play egcwele umcabango wezakhiwo, yakhiwe ngokuvumelana nemibono izakhiwo bendabuko kunzima ukubona ijika nezinhlobonhlobo zezimo, nombala ucebile, ukunambitheka kwenkathi ecebile, kufaka ubuhle bezakhiwo ukucindezeleka.Bambisana nesibani sezibani ukwakha indawo yasebusuku kalula, unikeze umuntu ukuba ajabule ngobuhle besikhathi samanje.
(3) Umnotho: I-membrane impahla inokuhambisa okuthile okukhanyayo, okunganciphisa amandla okukhanyisa nesikhathi emini futhi konge amandla; Ukudluliswa kwamalambu anemibala ebusuku kungakha indawo enhle.Ngaphezu kwalokho, isakhiwo se-membrane singaqedwa, kulula ukuhambisa, ikakhulukazi ekwakhiweni kwezicelo zesikhashana esifushane zezakhiwo ezinkulu zesikhala, ezonga kakhulu.
(4) Ukuphepha: Okwenziwe ngefilimu kunokulibazisa kwelangabi nokushisa okuphezulu, kungahlangabezana nezidingo zokuvimbela umlilo; Isakhiwo se-membrane siguquguquka, esingathwala ukufuduka okukhulu futhi akulula ukuwa. Isakhiwo se-membrane sinesisindo esincane esifile nokusebenza okuhle kokuzamazama komhlaba.
(5) Ukuzihlanza: Izinto ze-membrane ezinokumbozwa okuvikelayo zisetshenziswa ekwakheni ulwelwesi, okungabi okunamathelayo. Uthuli oluwela phezu kwento yolwelwesi lungagezwa ngokwemvelo ngamanzi emvula ukufeza umphumela omuhle wokuzihlanza nokuqinisekisa impilo yenkonzo yesakhiwo.
(6) umkhawulo wesikhathi esifushane: ukusikwa kwedayaphragm, ukukhiqizwa kocingo nensimbi, njll. kuyaphothulwa efektri, kunciphisa isikhathi sokwakha, kepha ngezakhiwo zikakhonkolo eziqinisiwe eziphansi noma izingxenye, njll. Ngesikhathi esifanayo, gwema ukwakhiwa kwesiphambano, esizeni sokwakha ucingo nje, isakhiwo sensimbi kanye nokuxhunyaniswa kwendawo yokufaka i-diaphragm kanye nokuqiniswa kwenqubo, ngakho-ke ukwakhiwa kwesiza, ukufakwa okusheshayo okusheshayo, ngokuhlobene nesikhathi esinqunyelwe sokwakhiwa kwesikhathi sephrojekthi.
(7) Isicelo esibanzi: Ngokombono wezimo zezulu, izakhiwo zesakhiwo se-membrane zisebenza endaweni ebanzi; Ngokwesilinganiso, ingaba ncane njengetende elilodwa noma umdwebo wensimu, noma inkulu njengezakhiwo ezihlanganisa amashumi ezinkulungwane noma amakhulu ezinkulungwane zesikwele Kwakukhona nomqondo wokumboza idolobha elincane nokusebenzisa imvelo eyenziwe ngumuntu.
Ulwelwesi Ukwakhiwa Isigaba
Umdwebo wesakhiwo se-axonometric
Langaphambilini Uzimele weNet, Isigaba Sokwakheka Kobungqingili
Olandelayo: I-Villa Design
Ukwakhiwa Kokulungiswa Kwelwelwesi
Ukwakhiwa Kokulungiswa Kokulungisa Umklamo